အမိုက်စားဖန်တီးမှုတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့ ချိုပြုံးရဲ့မြေးလေး ဝင်းခန့်မိုး - Cele Gabar
Home/Cele News/အမိုက်စားဖန်တီးမှုတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့ ချိုပြုံးရဲ့မြေးလေး ဝင်းခန့်မိုး
အမိုက်စားဖန်တီးမှုတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့ ချိုပြုံးရဲ့မြေးလေး ဝင်းခန့်မိုး
bagyiaung October 17, 2020	Cele News
ပရိသတ်ကြီးရေ တစ်ခေတ်တစ်ခါက အောင်မြင်ကျော်ကြား လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီး ချိုပြုံးကတော့ သူ့ရဲ့အနုပညာအမွေတွေကို မြေးဖြစ်သူ ဝင်းခန့်မိုးကိုပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ ။ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့အသည်းကျော် တက်သစ်စ မင်းသားလေး ဝင်းခန့်မိုးက လတ်တလောမှာတော့ ဒါရိုက်တာထူးပိုင်ဇော်ဦးရိုက်ကူးနေတဲ့ “လရောင်အောက်ဘက် မိုင်အဝေးမှာ” “Yangon In Love”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနှစ်ခုမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေသူပါ။
လက်ရှိမှာတော့ ???? ????? ?????? ???????? အတွက် “??????? ??” ဆိုတဲ့ Editorial Cover Set လေးနဲ့ ဝင်းခန့်မိုးရဲ့အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ် ။ Stylist တွေနဲ့အတူ အမိုက်စား Photographer ကရိုက်ကူးပေးထားတာဖြစ်ပြီး မြင်နေကျမဟုတ်တဲ့ ဝင်းခန့်မိုးရဲ့ လုံး၀ ဂေါ်ထွက်နေတဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေကတော့ အရင်ပုံစံတွေနဲ့မတူ ကွဲထွက်နေတဲ့ ဝင်းခန့်မိုးရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အရမ်းကို သဘောကျနေကြတာလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ် ။
ဝင်းခန့်မိုးရဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ???? ????? ?????? ???????? အတွက် ရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ ဝင်းခန့်မိုးရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း တမျိုးအမြင်ဆန်းပြီး ဝင်းခန့်မိုးရဲ့ အမိုက်စား ဖန်တီးမှုတွေကို နှစ်သက်သဘောကျလိမ့်လို့ ထင်ပါတယ်နော် ။
Source :Win Khant Moe
Emily ( Cele Gabar)
Previous ဖခင်ဖြစ်သူ အရိုင်းကို ပထမဆုံး ပွဲထုတ်ပြီး သူမရဲ့ဘလော့လေးကို စတင်ခဲ့တဲ့ ပျိုပျိုမေ
Next အိမ်မှာနေတဲ့ကာလကို မိသားစုအတွက် လက်စွမ်းပြချက်ပြုတ်ပေးရင်း ဖြတ်သန်းနေတဲ့ မေမီကိုကို